Blog – Page2– TajaNepal
काठमाडौं । नेपालमा भूमाफियाको कतिसम्म जगजगी छ भने कुनै दिन सिंहरदबारमाथि पनि व्यक्तिले दाबी गरे भने अनौठो मान्नु पर्दैन । किनकि देशमा बढिरहेको भूमाफियाहरुको जगजगीप्रति अदालत समेत मिसिएको अवस्थामा सरकारको त के कुरा गर्नु हामीले…
निगममा सुरेन्द्र छानिने
आर्थिकJanuary 1, 2019
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी बन्नका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका १७ जनाबाट छानिएका पाँच जनामध्येका सुरेन्द्र पौडेलको पल्लाभारी छ । पौडेलले डुबेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग उकासेका छन् । प्रतिस्पर्धामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र डुबाएका अनिल…
चारतारे काँग्रेसका चार जनाकै तेस्रो धार
काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलको लोभी चरित्र थाहा पाएपछि पौडेललाई त्यागेर आफ्नै धार खडा गर्न थालेका झापाली काँग्रेस कृष्ण सिटौलाले पेलेपछि नै विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीको प्रवक्ता बन्न राजी भए । यिनै सिटौलाका कारण राप्रपाको बीउ झापामा…
यी रहेछन् भारतका विश्वासी !
बहसJanuary 1, 2019
काठमाडौँ । राजनीति नेपालमा गर्ने, सत्ता नेपालकै हाँक्ने तर मताधिकार, चिन्तन, दृष्टिकोण मात्र होइन, जनताले देख्ने गरी प्रवृत्ति भारतीय दर्शाउने नेपाल भूमिका सपूतहरू उपेन्द्र यादव, अनिल झा, विजय गच्छदारको राजनीतिक हाउभाउ र बेलाबेलामा धम्की किन…
कसरी हुन्छ त पार्टीमा सर्वसम्मत !
बहसDecember 25, 2018
माओवादी पुच्छर हो एमालेको ? काठमाडौँ । पार्टी नेकपा अथवा नाम जे राखे पनि नेताको स्वर्थले राज्यको सेवा–सुविधा गुटको सेवाबाट हुन थालेपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक कसरी सर्वसम्मत हुन्छ ? यस पटक लामो समयसम्म आकुल–व्याकुल…
देवत्वकरणमै प्रमको रुचि !
काठमाडौँ । ठूला विवाद नेताको स्वार्थसँगै ठोक्किएको छ । काँग्रेसको महासमिति बैठकमा समय लम्बिनु वा सत्ता पक्षका नेताहरूद्वारा सरकारको काम गराइका बारेमा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । नेकपाभित्रको गुटबन्दीले सरकारको कामका बारेमा आलोचना हुनु स्वाभाविक…